Madaxwayne FARMAAJO oo ka hadlay Qaraxii Miino ee lagu dilay Saraakiisha | KALSHAALE
Madaxwayne FARMAAJO oo ka hadlay Qaraxii Miino ee lagu dilay Saraakiisha
Dec 6, 2018 - 11 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid Taliyihii, Abaanduulihii iyo askar ka tirsan Qaybta 12-ka Abriil ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed kuwaas oo ay miino dhulka lagu aasay kula qaraxday meel u dhaw deegaanka Dhanaane ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Jaale Madaxweeyne daanyeernimada inta aad joojisid dadka runta u sheeg. Sow ma’ogid beenta in eey xaaraan tahay? Sidee beey labadaan nin iyo askarta kale ee dhimatay naftooda uGu hureen dalka iyo dadka Somaliyeed? Wax guul ah oo eey sameeyeen, amaba kusoo kordhiyeen amniga Mogadisho iyo Koonfurta Somaliyeed miyaa jirta? Meel eey kula dagaalameen ciidanka dowladda argagixisada alshbaab, kana saareen, siina joogeen ciidankaan daanyeerada ah ee Somaliyeed miyaa jirta?
Qof xataa naftiisa sugi waayay, naf kale iyo shacab amnigooda ma sugi karro. Si nafta dadka loo sugana, waa in si geesinimo ah loola dagaalamaa argagixisadda alshbaab. Taasna ma dhicin 16 sanno oo ciidan been ah oo mooryaan ah la malmaluuqayay. Fashilka uGu weeyna maahan ciidankaas ee waa dadka hogaamiyayaasha ah iyo madaxda dowladda dhexe, oo aad adiga hadeer kow katahay jaale madaxweeyne.
bal ninkan bacalwaan eega siduu ugu dhameyey M WAYNIHII VILA XAMAR
KULAHAA MADAXDA SOMALIYA LOOGAMA OGOLA TACSI WAAYO WAXA LA WAAYAA CAAWIMADII caalamka farmajo wuxuu yiri waa nabad dalku intaan imi ama 10 ama 100 aday kuu taal ALLU AKBAR
Meesha waxaa qarxiya..8 kooxood oo dagaalka.
1. Qolo cadow neceb Somali oo in Somalia degin raba.
2. Cadowga kuwo la shaqeeya oo contract ka qaadatay.
3. Mooryaan dagaalka ku taajiray oo in nabad dhacdo rabin iyo dowlad timaad oo bililiqo waardiyeysta.
4. Mafia caadi ah oo ninka Lacag siin waaya dila.
5.Alshabaab oo aan diin shaqo ku lahayn contract ka qaata ninka dirsada, waana wiilal yaryar, marka la qabto 100 dolar la isiiyey yiraada, markii horena naag la kufsaday laga dhalay oo dagaaladii ka dib dhashay.
6. World politics oo Somali la isku haysto Somalia, Qadar, Emitares, Sauudi, Turki, Europe. USA iyo wadamada deriska oo qoloba kuwo taageerto oo islugoynaya marmar isqaarijiya.
Amisom oo in baxdo rabin, inta Amisom jirto Musazeni waa joogin oo dagaal ku jiraa oran, askar dolar wadata u dirin cidda dalkiisa mucaarad ku ah, hubna lagu siiyo.
8. Dad walaal oo dagaalada ku waashay oo hub iska sita oo qof jid maraya xabad isaga dhufan, mid la qabtay oo la yiri, maxaad ninkaan ku dishay kuye: Anaguu shaar qurux badan noo gashaday.
Yaab.. Qaar kale jiraan.
This will take long time, daanyeertaan Khayre iyo Farmaajo intay howlahaan wax ka qaban lahayeen oo ciidan dhisi lahaayeen ku mashquulsan, Sakiin, Madoobe iyo Gaas shaarubaha dhulka ugu xir.
Isma weydiiyaan hadday baxaan madaxda maamul goboleedka maxaa ku xiga!
Raxanwayntu aadbay ugu dhawyihiin Canfarta iyo dadyoow badan oo dhinaca Ethopiya innaga xiga.Gaar ahaan dadka yidhaa Agew-ga.
Si kastaba dhaqan quto dheer lama laha Ugaadhsatada.
Bal ku yara nasta ciyaartan
War ninyohoow mexno ayaad tahay. Waxaad jeceshahay dhaqanka tulooyinka Somalida dhan in aad barato.
Samaroon ka yimid boorame ee hadana jecel in uu barto tuulo kasto oo Somaliya ah waxa yaalo adigaa iigu horeeyo. Inkastoon leeyahay asxaab badan oo Reer boorame ah.
Ciyaartaan waan ka helay.
Sxb,waan badhaa dhaqadama Somalida ee degmooyimnka kala duwan iyo waliba dadyoowga inagu xeeran.
Laalays, Rooble & sOmalilander oo wada socda ayyaa soo agmaray mid reer Wanlaweyna & 3Gaala oo Dagaalama. *Wiilka reer Wanlaweyn wejigiiso dhan waa bararsanyahay, isha bidxe korkeedana wax yar oo dillaaca baa ka garay. *Roobla yiri WAAR wiilku waa Somali. *sOmalilander baa yiri maxaan yeelna?. *Laalays baa ugu jawaabay WAR naga kaxeeya Waa Wanlaweynti caqliga xumeyd oo meel kastaba isku tuuri–jirte. *Roobla yiri waxay ila tahay inaan wax ka qabano. *Laalays baa yiri WAR kuwaani ma istaahilaan in loo hiiliyo ee INA mariya. *sOmalilander walle waa jaahwareer. *Laalays war namariya Waxaani nama quseeyaane. *Wiilki reer Wanlaweyn dhibaato loo geysay isna wax gaysay. *Qoladi reer ISAAQ waxay qaateen taladi Laalays Socodkoodina iska sii wate. WBT
asc waar axmed somaali war bixintan ad so gudbisay miyaad ku riyootay sxb mise waa mana awaal oo xaal koofurta ayaad aragtay in ay waxba kaso naasa cadden iyo alka ay taagan yihiin reer waqooyi siday noqotaba maxuma sida aad udhigtay ee maad tashataan reer waqooyo marhore ayuu tashaday sxb lkn haddad talo naweydisaan diyaar ayaanu unahay lkn waa in aad markahore hurdada ka kacdaan oo aad khiyaaliga kabaxdaan
Alshabab,ISIS,iwm dabcan waxaa laga fangareeyaa Xalane,Balidoogle,iwm.
Waa isugu kaymid Xalane & Alshabab.why?midna wuu u soo dejiyaa waxyaalaha qarxa.
Midna wuu Qarxiyaa.
They are ONE group.
Donald Trump says:Obama he founded of ISIS.
Israeli did 9/11=weerarkii 2001.
waxa an jecelahay walaalahay reer koofur in ay nabada an ku nolahay oo kale ay helaan allena waxba kuma ah in uu siiyo lkn wa imtaxaan waxa haysta mar un ayayna kabaxayaan inshllh